Fomba 12 hitazomana olona liana aorian'ny hatory miaraka aminy - Fifandraisana
Fomba 12 hitazomana olona liana aorian'ny hatory miaraka aminy
Efa natory tamina tovolahy iray ianao, ary tianao azy ampy ny maniry ny hanohy zavatra hafa.
Saingy manahy ianao sao tsy hahita anao toy izany izy, na nihemotra izy taorian'ny nanaovanao ilay asa ary tsy azonao antoka ny antony.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizaha izay tena mandeha ao an-tsain'ny lehilahy aorian'ny fatorianao miaraka amin'izy ireo, ary maninona no maro amin'izy ireo no manova ny fitondran-tenany aorin'izany.
Raha tsy azonao antoka ny fomba hitazomana azy ho liana ary te hampanao azy hanohy hanenjika anao, vakio hatrany…
1. Diniho ny fisainany.
SASANY ny lehilahy manenjika ankizivavy iray zavatra - firaisana. Vantany vao azon'izy ireo izany dia vonona matetika izy ireo handroso.
tsy ato amiko fotsiny izany
Ireo karazana tovolahy ireo dia tsy mamorona fifandraisana ara-pihetseham-po mahery toy izany amin'ireo mpiara-miasa aminy toy ny vehivavy maro.
Raha vantany vao azony izay tadiaviny dia faly manenjika ny olona manaraka izy ireo.
Marina fa ny ankamaroan'ny tovolahy dia tena hita maso, ka hanaraka ireo vehivavy hitany fa manintona ara-batana. Mety tsy tsapan'izy ireo ny filàna hahafantarana ireo vehivavy matorin'izy ireo tsara amin'izany rehetra izany, satria vao avy zavatra fohy sy mahazatra fotsiny.
Lehilahy maro amin'ny 20 sy 30 tsy mitady hipetraka - rehefa dinihina tokoa, nahoana izy ireo no tokony? Afaka matory izy ireo, miala voly ary manao izay tiany ary tsy misy fanoloran-tena na fatorana.
Izay no mahatonga ny fihetsik'izy ireo mety hiova tampoka raha efa natory azy ianao.
2. Fantaro ny ‘fiovana.’
Ho an'ny tovolahy sasany, ny maraina aorian'ny hook-up dia midika zavatra iray - ny fivoahana. Nahazo izay notadiaviny izy ireo ary tsy mitady zavatra matotra, koa maninona no manelingelina?
Raha toa ny fiasan'ilay tovolahy tianao izao satria efa niara-natory ianao, dia mety matahotra izy sao hiezaka hanery azy hifandray aminao.
Mety ho toa tsy misy dikany izany, saingy bandy maro no manahy fa ny fanoloran-tena amin'ny zavatra hafa mihoatra ny fijoroana iray alina na fandosirana tsotsotra dia midika fa voafatotra mandritra ny androm-piainany izy ireo.
Mety hanomboka hikoropaka izy ireo fa hanasa azy ireo hihaona amin'ny ray aman-dreninao ianao, na hanantena tampoka azy ireo hanolotra sosokevitra na hiara-hipetraka aminao.
3. Ataovy toy ny mahazatra!
Azonao atao ny mitondra azy any amin'ny ambaratonga manaraka, fa tsara kokoa ny tsy manonona an'io fotsiny aloha!
Vao avy natory tamin'ny olona iray ianao dia tsy ny fotoana mety indrindra hitondrana ny zava-misy fa manaraka zavatra matotra ianao.
Izany dia mirona ho iray amin'ireo zavatra izay tena mamono ny tovolahy na manosika azy ireo, ka aza avela ho azy io amin'izao fotoana izao.
Mety hahatsapa zavatra be dia be ianao dieny izao, ary mety efa nianjera taminy bebe kokoa ianao hatramin'ny nizara zavatra akaiky anao indrindra, saingy mila maka zavatra miadana ianao.
iza no tompon-daka wwe 2016
Afaka miresaka momba ny mampiaraka ianao amin'ny manaraka. Aza maika izy na manery azy hanao zavatra ary hanatona anao amin'ny fotoany izy.
4. Mifantoha amin'ny tenanao.
Ny zavatra ataon'ny vehivavy maro aorian'ny matory amin'ny lehilahy dia ny manome azy ireo ny sainy rehetra. Mampihetsi-po, indrindra raha mieritreritra ianao fa manana fahatsapana azy ireo.
Mahasosotra, 'itondray ny dikan'izy ireo hitandrina azy ireo' dia mety ho marina tsara - arakaraka ny itiavanao ny tenanao amina olona iray no tsy dia mahaliana azy ireo, ary ny mifamadika amin'izany no mifamadika amin'izany.
Rehefa mitazona kely ianao dia hamorona mistery misimisy kokoa manodidina anao ary hanenjika anao indray izy ireo.
Mety ho tena tiany koa ianao, fa arakaraka ny anehoanao fahalianana no hahalalana fa hiverina ihany koa izy.
Tsy misy dikany izany, fantatray, fa avelao izy hanantona anao - raha tsy izany, na toy inona na toy inona ny itiavany anao dia hahatsapa izy fa voafatotra aloha loatra ary ho tezitra aminao noho izany.
5. Afangaroy izy.
Matahotra ny bandy sasany fa raha vao efa natory amina olona iray izy dia ny fanoloran-tena no hany sisa tavela.
Mba hitazomana ny fahalianan'ny lehilahy iray, afangaro ny zavatra rehetra! Miala voly ary milalao manodidina - asehoy azy ireo fa tsy pony tokana ianao, noho ny filanao fehezanteny tsara kokoa.
Meteza ho vehivavy mahafinaritra sy mahafinaritra dia mahafinaritra ny mandany fotoana ary tazomy haminavina izay hataonao manaraka.
Mazava ho azy fa ao amin'ny efitrano fandrianana izany, saingy mety ho any amin'ny toerana fihaonanao ihany koa, zavatra mahafinaritra azonao, ary ny fihetsikao manodidina azy.
Mamorona enigma manodidina anao rehefa mamela azy hahita ny lafiny filalaovana kokoa ny toetranao.
6. Miezaha ho azy.
Averiko indray, manahy ny bandy sasany fa lasa lehilahy tokana vehivavy tampoka dia midika fa ho lasa mahazatra sy mankaleo be ny fiainana.
Mety efa nahatsapa ho voafatotra izy ireo - fantatsika rehetra fa ny klika manodidina ny vehivavy ho ‘baolina sy rojo vy’ dia tsy mitombina tanteraka, fa ny lehilahy sasany kosa mbola manahy sao ho voafetra ny fiainany.
Hiadiana amin'ity stereotype ity ary hitazomana azy ho liana, mahafinaritra sy ho azy!
Asehoy azy fa vehivavy manaitaitra sy mahaliana ianao izay manampy zavatra manokana amin'ny fiainany - fa tsy olona iray izay hiantso azy lalandava rehefa miaraka amin'ny namany izy na te handany fotoana irery!
7. Matokia - na farafaharatsiny hosoka io!
Ny bandy dia tsy tia anontaniana foana, ary azo antoka fa tsy tian'izy ireo ny olona manasongadina fa mandainga izy ireo.
Noho izany, alaivo matoky tena ianao fa tsy manantona azy tsy tapaka amin'ny fiantohana toky na miampanga azy ho tsy marina amin'ny zavatra tsapany momba anao.
Fantatray fa ataonay ho mora izany! Izay no antony mody ny matoky tena dia mendrika hiezahana ihany koa…
Arakaraky ny maha-azo antoka kokoa anao sy ny fahatokisanao tena kokoa no mahaliana azy.
Te handany fotoana amin'ny olona mahalala fahafinaretana sy mahalala ny maha-ara-nofo azy izy - koa mifandraisa amin'io lafiny io, alao izany mandra-pahatonga anao hanao izany raha ilaina izany, ary jereo ny hafainganan'ny fanenjehany anao!
8. Ataovy mahasosotra izany.
Mazava ho azy, raha mikasa ny hampiaraka amin'ity lehilahy ity ianao na mieritreritra ny hikatsaka fifandraisana aminy aza dia mila mahafantatra azy amin'ny sehatra lalindalina kokoa ianao!
ahoana ny fitiavana no mandratra be
Amin'izao fotoana izao, na izany aza, tsy maninona ny mitazona ny zavatra hatsaran-tarehy.
Manafosafo azy amin'ny hafatra mampitolagaga, ampahafantaro azy ianao mieritreritra ny fahafinaretanao niaraka taminao tao amin'ny efitrano fandrianao, ary angamba manolotra zavatra mahafinaritra hanandrana amin'ny manaraka.
Ity dia fomba tsara iray hanehoana fa manintona azy ianao ary liana aminy nefa tsy mampihetsi-po be loatra na cliky haingana.
Fomba tsara hitazomana azy hahaliana anao koa izany - tadidiny fa tena tiany ny niara-niasa taminao ary ho faly mahita anao indray.
Rehefa mandeha ny fotoana dia ho lasa akaiky kokoa ianao ary hanomboka hifamatotra amin'ireo zavatra tsy dia mifehy tena!
Ka, milalao azy milay ianao ary manome azy toerana kely , mandritra ny fotoana rehetra anehoanao fa mahafinaritra sy mahafatifaty ianao!
Aza matahotra ny mandatsaka lahatsoratra aminy mba hampahafantarany anao fa nahafinaritra anao ny nandany fotoana niaraka taminy. Tsy ilaina ny maneho ny fahatsapanao amin'ny fomba mahasalama sy refesina, rehefa dinihina tokoa.
Mandefasa zavatra mahafinaritra sy maloto - hahatsapa ho mahafinaritra sy manintona izy amin'ny fandokafana, ary hahatsapa ho tsara izy rehefa natory niaraka taminao. Izy io koa dia ho fampahatsiahivana kely ny fisianao ary hitazona anao amin'ny radar-ny.
Raha tsy mihetsika amin'ny lalana antenainao ny zavatra dia mety tsy mahazo ilay hafatra ezahinao halefa izy.
Raha efa milalao mafy hahazoana fa manintona ny maniry zavatra bebe kokoa, na efa nanantena ianao fa ho azony amin'ny farany fa maniry bebe kokoa ianao, tonga ny fotoana hanaovana resaka marina.
Manaova teny marina aminy - nahafinaritra anao ny niara-natory taminy, saingy maniry bebe kokoa ianao. Tsotra izany.
Tsy mila miditra amin'ny antsipiriany be loatra ianao ary handamina ny 20 taona ho avy miaraka, fa afaka miteny ianao fa te mampiaraka azy manokana .
Tsy maninona ny mametraka fanantenana, fa aza mikendry avo loatra haingana loatra!
Samy tsy manana trosa na inona na inona ianareo satria fotsiny niara-natory, ary tsy voatery hieritreritra amin'ny fomba mitovy amin'ny azy izy - na ny sakaizanao, na ny anao taloha, na ny tovolahy amin'ny fahitalavitra. mijery manao!
Avelao izy hanana fotoana sy fotoana kely hamantarana ny dikan'izany rehetra izany aminy.
11. Aza sorohina.
Tadidio fa ny firaisana dia mety hidika zavatra tsy mitovy amin'ny tsirairay avy aminao, ary miezaha hihazona azy tsy hitady zavatra.
Ampahafantaro azy fotsiny fa mahafinaritra anao ny mandany fotoana miaraka aminy ary maniry ny hanao izany bebe kokoa.
Tsy clingy na sahirana io, na ny iray amin'ireo teny mahatsiravina hafa izay matetika mahazo marika ny vehivavy, fa mahitsy sy matotra fotsiny.
Izy io koa dia manampy anao hitantana ny zavatra antenainao manokana ary hanampy anao hisoroka ny fahadisoam-panantenana diso raha tsy zavatra mitovy no tadiaviny.
Izahay tsy mirona amin'ny famporisihana ireo ultimatum, satria afaka misavoritaka izy ireo ary sendra mila fanampiana sy manodinkodina, fa azonao atao ny mampahafantatra azy ny zavatra tsapanao sy izay tadiavinao.
Aza hadino ny zavatra tsapanao ary avelao izy handray ny fanapahan-kevitra. Ho hazava vetivety ny zavatra tsapany momba anao ary hahatsapa ho tsara kokoa ianao noho ny fahalalana ny toerana misy anao, na aiza na aiza misy izany.
12. Fantaro ny fotoana hiantsoana azy hoe iray andro.
Ka, ianao dia mistery, ianao efa vehivavy nofinofy ary niezaka ny ho maivana sy hahafinaritra araka izay tratra.
hevitra tokony hatao rehefa mankaleo ao an-trano ianao
Raha mbola tsy manakaiky kokoa ny fahazoana izay tadiavinao ianao dia efa nilaza taminy mazava fa mila zavatra matotra kokoa ianao dia tonga ny fotoana iantsoana azy hiala.
Sarotra ny hanaiky fa tsy mandeha amin'ny olona ny zavatra rehefa misy ny fahatsapanao azy, fa tsara kokoa ny manao azy haingana kokoa fa tsy aoriana, matokia anay.
Raha tsy afaka manome anao izay tadiavinao izy, ary nomenao azy indrindra ny safidy hanana anao amin'ny fe-potoanao na tsy hanana anao mihitsy, mila mandroso ianao.
Sarotra ary tena mety handratra , fa mila mametraka ny tenanao sy ny filanao / fanirianao aloha ianao.
Hahita olon-kafa mifindra amin'ny hafainganana mitovy aminao ianao ka afaka manome anao izay tena tadiavinao.
Tadidio fa ny fahasambaranao no zava-dehibe indrindra, koa ataovy lohalaharana ny fihetseham-ponao ary tazomy ny lohanao!
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hitazomana anao foana ity lehilahy ity fa efa natory niaraka taminy ianao?Maninona no mandeha irery raha afaka miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana ianao ary mahazo torohevitra manokana momba ny toe-javatra misy anao sy ny fomba fitondran-tenan'ity lehilahy ity izao. Mety ho ny tsy fitovizan'ny zavatra mandeha na aiza na aiza ary mitarika amin'ny fifandraisana maharitra sy sambatra.Miresaka an-tserasera amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Inona no dikan'ny hoe miadana ny lehilahy / zazavavy?
Antony 10 Izy mitazona anao manodidina rehefa tsy te hanana fifandraisana
Inona no hotadiavina amin'ny lehilahy: toetra tsara 20 tadiavinao amin'ny lehilahy iray
Famantarana 9 Te hanana fifandraisana izy, saingy atahorana
ahoana no hahaizana tsara olona iray
dia lahy ary ilay mpiahy tena mpirahalahy
boaty miafina kosmetika kintana jeffree
zava-misy mahafinaritra milaza momba anao
inona no tiako hohafanaina